English to Burmese (Myanmar) translator, voice over, proofreader
Aye Myint Myat Khine
Translator, Voice Over, Proofreader
Local time: 00:58 MMT (GMT+6.5)
Services Translation, Voiceover (dubbing), Transcreation, Interpreting, Transcription, Editing/proofreading
English to Burmese: Unique Selling Point_7-in-1 (Eng=>Unicode Myanmar)
Come visit the Best Asian Sourcing Show in Hong Kong this October
The Biggest Asian Sourcing Show In Hong Kong Every October
As the largest sourcing show every October in Hong Kong showcasing the broadest range of gifts, housewares, toys & games, seasonal products, travel accessories, stationery & sanitary ware from around 4,000 Asian-based exhibitors, the Hong Kong October Show is THE PLACE where you join the 49,000 global buyers to embark on an amazing sourcing journey this October.
Asian-made products are the top sought-after sourcing choice by global buyers across the world for their trendy design, good quality and competitive prices. These shows are premier showcase of International products and suppliers, with exhibitors from 30 global countries & regions presenting their latest and coolest product lines.
The show dates that coincide with the October peak sourcing timeslot isagood fit for global buyers on their autumn Southern China sourcing circuit. The show is staged right before Canton Fair Phase2& Phase 3, you can easily source for all kinds of gifts and premiums in one sourcing trip.
If you are looking for latest highly profitable new merchandise to grow your business and keep ahead of competition, we have it all here in Hong Kong. Discoverawide range of high-quality and competitively priced gifts, housewares, toys & games, seasonal products, travel accessories, stationery & sanitary ware and so on -alot of which are never-seen-before products that are revealed for the first time at the show.
More than 4,000 suppliers from around 30 countries and regions will be exhibiting at the show this year, together putting up 5,300+ booths. It’sagreat chance to touch base withalarge number of quality exhibitors mainly from Asia, from top veteran suppliers to fresh start-ups and newcomers of the show.
Enjoyacost-saving sourcing trip by applying the show’s Special Sponsorship Program for all qualified visiting buyers. You can receiveacash sponsorship of up to HKD4,800 when attending the show during 20-23 & 27-29 October. (Terms & Conditions Apply) Translation - Burmese
ယခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင် အာရှ၏ အကောင်းဆုံး အရင်းအမြစ်ပြပွဲကို ဟောင်ကောင်တွင် လာရောက်လေ့လာလိုက်ပါ
၁။ ဟောင်ကောင်မြို့တွင် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အောက်တိုဘာလတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အကြီးမားဆုံး အာရှအရင်းအမြစ်ပြပွဲကြီး
ဟောင်ကောင်မြို့တွင် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အောက်တိုဘာလတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အကြီးမားဆုံး အာရှအရင်းအမြစ်ပြပွဲကြီးအနေဖြင့် လက်ဆောင်များ၊ အိမ်သုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ အရုပ်နှင့် ဂိမ်းများ၊ ရာသီပေါ်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ခရီးသွားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ စာရေးကိရိယာများနှင့် ရေချိုးခန်းအသုံးအဆောင်များကို အာရှအခြေစိုက် ပြပွဲပြုလုပ်သူ ၄၀၀၀ ခန့် ပါဝင်ပြသမည့် ဟောင်ကောင်အောက်တိုဘာပြပွဲကြီးတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဝယ်လက်ပေါင်း ၄၉၀၀၀ခန့်နှင့်အတူ အံ့ဩဖွယ် အရင်းအမြစ်ရှာဖွေခြင်း ခရီးစဉ်ကို ပါဝင်လိုက်ပါ။
၂။ အာရှ၏ အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးများ တင်ပြထားမည့် ပြပွဲကြီး
အာရှထုတ်ကုန်များ၏ ခေတ်မှီသော ဒီဇိုင်း၊ ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် စျေးနှုန်းများကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဝယ်လက်များ၏ အရင်းအမြစ်ရွေးချယ်မှုတွင် ထိပ်တန်းစာရင်းဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုပြပွဲများသည် နိုင်ငံတကာထုတ်ကုန်များနှင့် ကုန်သွင်းသူများ၏ အရေးအပါဆုံးပြပွဲဖြစ်ပြီး နိုင်ငံဒေသပေါင်း ၃၀ကျော်မှ ပြပွဲပါဝင်သူများသည် သူတို့၏ နောက်ဆုံးပေါ် အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များကို ပြသသည့် ပြပွဲလည်းဖြစ်ပါသည်။
၃။ အလွန်ကောင်းမွန်သော တည်နေရာ
အာရှ၏ ဗဟိုအချက်အခြာကျသော ဟောင်ကောင်မြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် ပြပွဲသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ လာရောက်လည်ဝတ်ဝင်ရောက်ရန်လွယ်ကူခြင်း။
အာရှ၏ အဓိကမြို့ပြကြီးများမှ ဝယ်လက်များအနေဖြင့် ဟောင်ကောင်သို့ နှစ်နာရီအတွင်း လာရောက်လည်ပတ်နိုင်ခြင်း။
နိုင်ငံဒေသပေါင်း ၁၇၀ မှ ဗီဇာမလိုအပ်ဘဲ လာရောက်လည်ပတ်နိုင်ခြင်း
ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမှီ မြို့လယ်နေရာတွင် တည်ရှိသော ဟောင်ကောင်ကွန်ဗင်းရှင်းခန်းမသည် ပြပွဲလာရောက်သော ဝယ်လက်များကို အကောင်းမွန်ဆုံး အဆင်ပြေမှုနှင့် တုနှိုင်းမမှီသော ပြပွဲအတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း
၄။ အကောင်းဆုံး အချိန်
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဝယ်လက်များသည် တောင်တရုတ်​ဆောင်းဦးရာသီ အရင်းအမြစ်ရှာဖွေခြင်းစက်ဝန်း၏ အထွဋ်အထိပ်ကာလအတွင်းကျရောက်သည့် အောက်တိုဘာလတွင် ပြပွဲကျင်းပသည့် ကာလနှင့် တိုက်ဆိုင်နေပါသည်။ ပြပွဲသည် Canton Fair အပိုင်း ၂ နှင့် အပိုင်း ၃ မတိုင်ခင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သောကြောင့် သင့်အနေဖြင့် အရင်းအမြစ်ရှာဖွေခြင်း
ခရီးစဉ်တစ်ခုတည်းမှာပင် ကုန်ပစ္စည်းပေါင်း မြောက်မြားစွာတို့ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၅။ တစ်မိုးတည်းအောက်မှာပင် အရင်းအမြစ်ရှာဖွေနိုင်ခြင်း
သင့်လုပ်ငန်းတိုးတက်အောင်မြင်စေရန်နှင့် စျေးကွက်တွင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရည် ထိပ်ဆုံးက ရပ်တည်နေနိုင်စေရန် အတွက် အမြတ်များသော နောက်ဆုံးပေါ် ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များကို ဟောင်ကောင်တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ လက်ဆောင်များ၊ အိမ်သုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ အရုပ်နှင့် ဂိမ်းများ၊ ရာသီပေါ်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ခရီးသွားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ စာရေးကိရိယာများ၊ ရေချိုးခန်းအသုံးအဆောင်များ အစရှိသည့် စျေးကွက်တွင် တစ်ခါမျှမမြင်ဖူးသော ခေတ်အမှီဆုံးသော ကုန်ပစ္စည်းအမြောက်အများကို ပြပွဲတွင် ပထမဆုံး အနေဖြင့် ပြသသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုမျှမက ပြပွဲအတွင်းရှိ ဒီဇိုင်းစတူဒီယိုသည် ဒီဇိုင်းled၊ မူရင်းဖြစ်သော၊ ဖန်တီးမှုအသစ်ဖြစ်သော၊ စျေးကွက်တွင် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ရန် အသင့်ဖြစ်နေသည့်အပြင် နည်းပညာအရ ဆန်းသစ်သော၊ လိုင်စင်ရှိ branded ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဒီဇိုင်းစုဆောင်းမှုများ အစရှိသည်တို့ကို ပြသပါမည်။
၆။ တစ်နေရာတည်းမှာပင် သင့်ပစ်မှတ်ဝင် ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများနှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်း
ယခုနှစ်တွင် နိုင်ငံဒေသပေါင်း ၃၀ကျော်မှ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနိုင်သူ ၄၀၀၀ ကျော်တို့သည် ပြပွဲကြီးတွင် ပြခန်းပေါင်း ၅၃၀၀ ကျော်တို့ဖြင့် အတူတကွ ပြသသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အာရှနိုင်ငံများမှ အရည်အသွေးပြည့်မှီသော၊ စျေးကွက်စတင်ဝင်ရောက်သူများမှ ဝါရင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများအထိ ပြပွဲကျင်းပသူပေါင်း မြောက်များစွာတို့နှင့် တွေ့ဆုံနိုင်မည့် အထူးအခွင့်အရေးလည်း ဖြစ်ပါသည်။
၇။ အထူး စပွန်ဆာအစီအစဉ်မှ အကျိုးကျေးဇူးများကို ရယူခံစားလိုက်ပါ
လာရောက်လည်ပတ်သည့် အရည်အသွေးပြည့်မှီသော ဝယ်လက်များအားလုံးအတွက် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာသော အရင်းအမြစ်ရှာဖွေခြင်းခရီးစဉ်ကို ပြပွဲ၏ အထူးစပွန်ဆာအစီအစဉ်တွင် လျှောက်ထားခြင်းဖြင့် ရယူခံစားနိုင်ပါပြီ။ စပွန်ဆာအနေဖြင့် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၄၈၀၀ အထိ ငွေသားဖြင့် ရယူနိုင်သည့်အခွင့်အရေးကို အောက်တိုဘာလ (၂၀)မှ (၂၃) ရက်နေ့နှင့် (၂၇)မှ (၂၉)ရက်နေ့တွင် ပြပွဲကို တက်ရောက်ခြင်းဖြင့် ရယူနိုင်ပါသည်။ (စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအကျုံးဝင်သည်)
Translation education Master's degree - Yangon University of Economics
I amaMasters of Business Administration graduate.
I amacitizen and resident of Myanmar (Burma). I have started my career 6
years ago in both part-time, full-time and internship in vast areas of business
fields such as: trading & distribution, event planning, micro-finance,
education, construction, property development, marketing, finance, consulting,
information technology and game industries. I am able to communicate and
understand the terms and words of various field of study both in Burmese and
English. Moreover, I haveaproficiency in communication in Burmese, English,
Chinese and Japanese, whereas I have more confidence to work professionally in
Burmese(my mother language) and English. In addition, I have an excellent
record for English proficiency as one of the winners of Central Level English
Proficiency in whole Myanmar.
Myanmore Media asafull time employee and would like to keep in touch with the
language I am capable of and to earn extra during my free time by accepting
translation and review projects (English< >Myanmar(Burmese)). I am also a
certified translator at One Hour Translation and haveagood reputation of
error-free, timely and accurate services.
Keywords: Burmese, Myanmar, localization, translation, voice over, interpretation